Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shalay si rasmi ah xilkiisa ula wareegay ayaa aad ugu mahad celiyey Ra’iisul Wasaarihii xafiiska ku wareejiyey Maxamed Xuseen Rooble, isagoo u balan qaaday in taariikhdiisu aysan duugoobi doonin, inta uu joogo xukunka. Wuxuu sheegay inuu ahaa nin dadaal iyo Alle beri dalkaan uga soo samata bixiyey xaalad quus...
Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaloya Xassan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha Gurmadka Abaaraha iyo bini’aaadannimada Xildhibaan Cabdiraxman Cabdishakuur Warsame ayaa kulan qadka fogaan aragga ah la yeeshay Xildhibaan Ilhan Omar oo aqalka Congresska Mareykanka ku metesha Gobolka Minnesota. Ergeyga ayaa Xildhibaan Ilhan iyo dowladdeeda Mareykanka uga Mahad...
Dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ah ee Falastiin ee Xamaas, ayaa soo bandhigay muuqaal ay ku sheegeen inuu yahay askari Israa’iili ah oo ay qabteen. Muuqaalkan oo ay soo bandhigeen guutada Al-Qassam ee garabka hubaysan ayaa waxa uu soconayaa muddo 40 ilbiriqsi ah, waana markii ugu horeysay oo Xamaas ay soo bandhigto muuqaal kan la mid ah. Waxaana ninka Israa’iil...
Ciidamada Sudan ayaa weerar culus ku qaaday ciidamada Ethiopia ee ku sugan xuduudda, xilli ay xiisad xooggan ka dhex-qaraxday labada dal. Weerarka ayaa yimid kadib markii la dilay toddoba askari oo reer Sudan ah oo ay qabteen ciidamada Ethiopia 22-kii June, islamarkaana meydadkooda lasoo dhigay waddooyinka ayada oo sawirradooda la wareejinayey baraha bulshada. Ethiopia...
Madaxweynaha DG Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo la kulmay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad Jamhuuriyadda Federaalka waxa ay kawada hadleen xal u helista go’doonka saaran deegaannada Dowlad-Goboleedkaas. Laftagareen ayaa soo bandhigay xaaladaha adag ee Deegaannada Koofur Galbeed ka jira sida abaarta, Degmooyinka go’doonka galay...
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa la filayaa in Maanta oo talaado ah ay yeesheen mid kamid ah Kulamadooda caadiga ahaa maadaama Kulankii shalay oo Isniin ah yeelan jireen uusan qabsoomin. Guddoonka Golaha Shacabka ayaa xalay ku wargeliyay Xildhibaannada inay soo xaadiraan Kulanka maanta, iyada oo Ajanadaha kulanka uu...
Saraakiil militari oo sare oo ka kala socda Israel iyo Sacuudi Carabiya ayaa yeeshay wada-hadallo qarsoodi ah oo uu Mareykanka soo agaasimay, si ay uga wada-hadlaan iskaashi difaac oo ka dhan ah Iran. Wufuud ka kala socota Riyadh, Qatar, Imaaraadka Carabta, Bahrain, Jordan iyo Masar ayaa madaxa ciidamada Israel kula kulmay magaalada Sharma el-Shaikh bishii March, sida...
Ciidamada Kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee DANAB oo shalay la wareegay degaanka Ceelbaraf oo hoostaga degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa halkaasi waxaa ay ka bilaabeen howlgallo kala duwan. Ciidamada ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay dhamaan Xaafadaha degaanka Ceelbaraf, waxaana Ciidamada la sheegay inay galayeen oo baaritaano ay ku sameeynayeen...
Xubnaha Guddiga Guddiga ee loo xil saaray baaritaanka weerarkii Hoyga Nabaddoon Yaasiin Cabdisamad ee Magaalada Gaalkacyo ku qaadeen Ciidamo katirsan Puntland, xilli uu ku sugnaa Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa Natiijo soo saaray. Guddiga ayaa Xukuumadda Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni u gudbiyay Natiijada ka soo baxday Baaritaankoodii, iyaga oo soo bandhigay...
Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa hoygiisa ku booqday Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo todobaadkaan Xildhibaannada Golaha Shacabka ay codka kalsoonida siiyeen. Madaxweyne laftagareen ayaa ugu hambalyeeyay Ra’iisul Wasaaraha in uu helay kalsoonida Golaha Shacabka, una...